Dopamine၊ Testosterone ဟော်မုန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို dopamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသုတေသနဆောင်းပါးများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်နိုင်သည်။ Dopamine သည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အဘယ်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ရသနည်းဟုမေးမြန်းသောအခါအဖြေမှာ dopamine ဖြစ်သည်။ အများဆုံးသောတိုင်ကြားချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပြီးဆုလာဘ်စနစ်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံတွက်ချက်ခြင်းက dopamine အချက်ပြမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး၎င်းသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ဖြစ်စေ၊
testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးခွန်းများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤလေ့လာမှုအချို့တွင်သွေးတွင်း testosterone ဟော်မုန်းကိုမထိခိုက်ကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ Testosterone ဟော်မုန်းက ဦး နှောက်ထဲမှာ dopamine ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးလိင်ဆန္ဒကိုတိုးစေတယ်။ လိင်မှုဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းသောဓာတ်များကိုရရှိစေပြီး dopamine နည်းသည်။ လိင်မှုကိစ္စသည် testosterone ဟော်မုန်း၏သွေးအဆင့်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
Dopamine နှင့်အမျိုးသားလိင်ရာထူးအမည် (2001)
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်, receptor နှင့်ဆုလာဘ်များ (2008)
ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးမှီခို? တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားထံမှ Insights (2008)
psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2007) ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Cabergoline ကုသမှု။
estrus အမျိုးသမီးနှင့်အတူနေ့စဉ် interaction ကတုန့်ပြန်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများ (2014)
Dopamine agonist-induced penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်မှေးစက်ခြင်း - ဘိုးဘွားရိပ်သာရောမမြင့်မားသောကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု (၂၀၁၃): D2013 reccptors & erections
Dopamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည် (2001)
Dopamine, Noradrenaline နှင့်ရောမမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်ရှောင်ရှားအမျိုးသားသည်အထိအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ: အ Medial Prefrontal Cortex အတွက်တစ်ဦးက Microdialysis လေ့လာ
Dopamine က, Medial Preoptic ဧရိယာနှင့်အမျိုးသားလိင်အပြုအမူ (2005)
Dopamine: ကူညီပေးနေအထီးကအနည်းဆုံး 200 နှစ်ပေါင်းသန်း (2010) အတွက် copulate
ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသမီးဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatal BOLD တုံ့ပြန်မှု (2010) ရက်နေ့တွင် exogenous testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု
သင်းအမျိုးသားကြွက်များအားသုတ်ရည်ထိပြီးတော့ Medial Preoptic Dopamine သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် testosterone Metabolites ၏ဆိုးကျိုးများ (2003)
testosterone ဟော်မုန်း conditional ရာအရပျ preference ကို၏ expression alpha-flupenthixol ၏အရံသို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ (1998))
တိုးချဲ့ PACE မိတ်လိုက်စမ်းသပ်မှု (2011) လိင်စိတ်နိုးထထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ conditional ရာအရပျ preference ကို induces
အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ Extracellular dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့သက်ရောက်မှု (1995)
ဖြည့်ဆည်းလိုသောဆန္ဒ - အမျိုးသားများ၏ testosterone ဟော်မုန်း၊ လူမှုရေး၊
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ် medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်သလဲ? (2011)
အမြှေးပါးအန်ဒရိုဂျင် receptors အန်ဒရိုဂျင်အားဖြည့်ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ (2010)
နျူကလီးယပ်အတွက်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း shell ကို accumbens ။ (2012)
အန်ဒရိုဂျင် receptor အားဖြင့် tyrosine hydroxylase ဗီဇ၏မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်း။ (2006)
အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နျူကလိယ၏အကြိုးကိုထိခိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ testosterone ဟော်မုန်းထိုးဆေး accumbens ။ (1997)
လိင်ဟော်မုန်း Erectile အလုပ်မဖြစ်၏အဖြစ်အပျက်ခန့်မှန်းပြီး: တစ်ပြည်သူ့အင်အား-အခြေခံပြီးအလားအလာအလိုက်လေ့လာမှု (2015) မှစ.
အမျိုးသားကြွက် (2007) ခုနှစ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
လူမှု Modulation သို့မဟုတ်ဟျောမုနျး Causation? အသက်ကြီးလူကြီးများ (2015) ၏အမျိုးသားရေးကိုယ်စားလှယ် longitudinal နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ Testosterone နဲ့ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး၏ချိတ်ဆက်မှု
အထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine receptors ၏ stimulation နျူကလီးယပ်အတွက် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်တိုးအပို-ဆယ်လူလာ dopamine accumbens induces: ဗဟို oxytocin (2007) ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု
သည်အထိအတွက် Dopamine D2-လိုပဲ receptor Agonists အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း: strain ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့် Dopamine D2 သို့သော်မ D3 နှင့် D4 receptor (2009) ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ
နာမငြိမ်ခြေ Syndrome (2011) ကိုလင့်ခ်လုပ်ထားသော (L) သင်ျခြို